ONLF: waa naloo gacan dhaafay shidaalkanagii - BBC News Somali
29 Juunyo 2018
Jabhadda ONLF ayaa dhaliishay go'aanka ay dawladda Itoobiya shidaalka uga soo saartay Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Ra'iisulwasaare Abiy Axmed oo arrintaas ka hadlayana wuxuu sheegay in maalinkaste la soo saari doono 450 foosto oo shidaal cayriin ah, sannadka u horreeyana la filayo in ay ka faa'iidaan hal bilyan oo doolar.
"Anagu Itoobi kama mid nihin, dhaqaalaheeda lama lihin, siyaasadda Itoobiya waxba kuma lihin, dad la haystaan nahay qoribaana lagu qabsaday walina waan diidanayn oo iska caabin baan wadnay waana sii wadi doonnaa, hantida shacbi Soomaaliyeed baa iska leh Itoobiyana ma laha" ayuu yiri caddaani.
Ra'iisulwasaaraha cusub ee Itoobiya ayaa labadii bilood ee uu xilka hayay sameeyay isbadallo waawayn isaga oo cafiyay maxaabiistii siyaasadda, jacayl iyo wada jirna ugu baaqay dadka Itoobiya.
Muxuu ka dhiganyahay shirweynaha jabhadda ONLF uga furmaya Eritrea?
Waraysiga Caddaani hoos ka dhagayso.